सिन्धुली । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका दर्जनौँ गाउँ बिजुली बाल्ने प्रतीक्षामा बसेको वर्ष बितिसक्यो । तर, गाउँमा अझै बिजुली बाल्न सकेको छैन ।
गाउँ पालिकाकाले ध्यान नदिएको र ठेकेदार कम्पनीले समेत बेवास्ता गर्दा आफूहरूले समयमै बिजुली बाल्न नपाएको हरिहपुरगढी गाउँपालिका–६, का स्थानीय आइते लामाले गुनासो गरे । 'हामी वर्ष दिन देखी बिजुलीको पोल र तार हेरी रहेका छौं,' उनले भने, 'काम सकिएको ठाउँमा पनि किन यतिको समय बिजुली बाल्न नदिएका हो ? उता सरकार बिजुली खेर गयो भन्छ । कुरा बुझ्न सकेको छैन । विभिन्न बहानामा काममा ढिलासुस्ती गरेको स्थानीयको आरोप छ ।'
यता ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि भक्तराम थोकरले गाउँपालिका र स्थानीयको समस्याकै कारण काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘सुरुमा गाउँ सम्म सामान पुर्‍याउन समस्या भयो, फेरी गाउँमा पनि विवाद भयो ।’ उनले भने, ‘पछि फेरी बर्सातका कारण सडक नै भएन हामी जति सक्तो छिटो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ, तर कहिले सम्म वत्ति बल्छ ? त्यो भन्न सक्दैनौ ।’ गाउँ पालिकाले गरेको ढिला सुस्तीकै कारण त्यहाँका जनताले समयमै बिजुली बाल्न नपाएको उनको दाबी छ ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाकाे प्रवेश, गठबन्धनले गर्दा पायो एक सदस्य १४ मिनेट पहिले
यी दुई सांसदले मत नदिँदा हारे प्रदेश १ मा एमालेका उम्मेदवार बराल २७ मिनेट पहिले
मधेश प्रदेशबाट माओवादीकी अर्याल विजयी ३१ मिनेट पहिले